Somaliland: Madaxweyne Biixi Iyo Wakiilka UK Maxay Ka Wada Hadleen - #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Iyo Wakiilka UK Maxay Ka Wada Hadleen
Hargeysa(ANN)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, ayaa qasriga Madaxtooyadda ku qaabiley wakiilka cusub ee Dalka Britain usoo magacaabay Jamhuuriyadda Somaliland, Ambassador Lizzie Walker oo ay wehelinayaan saraakiil sarsare oo ka socda xafiiska Uk uu ku leeyahay Caasimada Somaliland ee Hargeysa.
Sida lagu sheegay qoraal saxaafadeed kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda Somaliland oo nuqul ka mid ah soo gaadhay Araweelo News Network, kulanka ayaa ujeedadiisu ahayd barasho iyo soo dhowayn.
Madaxweyne Biixi, ayaa uga xog waramay Ambassador Lizze horumarka ay Somaliland gaadhay iyo himiladeeda, isagoo uga mahadnaqay dawladda Britain iyo Baarlamaankeedaba dedaalkii iyo juhdigii ay geliyeen inay dareenkooda madax-bannaanida Somaliland ee ay la wadaagaan Beesha Caalamka dooddii soo jiidatay indhaha caalamka.
Qoraal saxaafadeedka, ayaa lagu xusay in Madaxweynuhu xusay intii kulanku socday in shacbiga Somaliland kaga jawaabeen dareen saaxibtinimo oo salka ku haya xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal Britain iyo Somaliland.
Dhinaceeda, Ambassador Lizzie Walker, ayaa xustay inay la dhacsan tahay dedaalka horumarineed iyo Dimuquraaddiyadeed ee ka hana qaaday Jamhuuriyadda Somaliland, kaas oo sababtay in adduunku maanta indhaha ku hayo horumarka iyo wanaagga Somaliland ka socda.
Kulanka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo Ambassador Lizzie Walker, waxa ku weheliyay Wsiir ku xigeenka wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland, sida lagu sheegay qoraal saxaafadeedka kasoo baxay qasriga Madaxtooyadda Somaliland.